Sida loo abuuro arjiga tirakoobka Nowgoal Data Grabber
Waxaad rabtaa inaad ogaato sida loo abuuro isla markiiba diiwaanka tirakoobka goolasha for your sharad sharadka online?
Barnaamijkan cusub ee sharadka isboortiga waxaa lagu magacaabaa Nowgoal Data Grabber nuxur ahaanna waa macdan qodayaal, macnaha ay toos ugu xirmayso barta tirakoobka ee caanka ah Nowgoal.com oo si otomaatig ah uga soo saaraa xog taxane ah bogagga boggan, sida tirada goolasha la dhaliyay iyo natiijada ugu dambeysa ee ciyaarta.
Ficil ahaan, inaad awood u leedahay inaad xog ka soo saarto 10 sano ka hor, mahadsanid Nowgoal Data Grabber waa suurtagal in la abuuro Rafaa keydka tirakoobka, waxtar badan u leh dhammaan kuwa kormeeraya halbeegyada la xiriira yoolalka kooxaha inta lagu guda jiro ciyaarta iyo kuwa sida cad u sharad ku saleysan xogtan.
Sida loo abuuro diiwaanka tirakoobka hadafka: exog ururinta
Kahor intaadan bilaabin dhismahaaga keydka tirakoobka goolasha, aan ku bilowno aragtida xogta aad awood u yeelan doonto inaad si otomaatig ah ula soo baxdo adigoo gujinaya gujis fudud mahadsanid software-kan cusub ThatsLuck:
magaca kooxda guriga;
magaca kooxda booqashada;
tirada goolasha ay dhaliyeen kooxda guriga joogta;
tirada goolasha ay dhaliyeen martida;
wadarta guud ee goolasha laga dhaliyay ciyaarta;
natiijada ugu dambeysa marka la eego wadarta tirada goolasha;
natiijada ugu dambeysa marka la eego calaamadda 1-X-2.
Sida loo abuuro diiwaanka tirakoobka hadafka: barnaamijka softiweer
Waxaan isla markiiba ku bilaabayaa sharaxaadda barnaamijka: sheyga ugu horeeya xagga sare ee Xarigga Iskuxirka waa inaan la beddelin gabi ahaanba, maxaa yeelay waa xarigga isku xirka bogga Nowgoal.com
Le tirakoobka goolasha waxaa laga soo saaray bogagga la xiriira buug-yaqaan caanka ah ee caanka ah ee Bet365; kuwa doonaya inay isku dayaan, iyagoo ku kala duwanaya qayb ka mid ah qoraalka meesha magaca buuggu ku qoran yahay, waa inay sidoo kale suurtogal u tahay in xog laga helo buug-gacmeedyada kale.
Isla markiiba hoosta waxaad ka helaysaa beeraha Xulo Taariikh u Dhaxeysa taas oo aad si ficil ah u gali doontid maalmaha (taariikhaha) aad xiiseyneyso soo saariddeeda, tusaale ahaan haddii aad rabto inaad soo saarto dhammaan tartamada sanadka 2019, waa inaad gelisaa 01/01/2019 qeybta koowaad iyo 31 / 12/2019 kii labaad.
Kadib guji kaliya badhanka midigta taariikhaha (Xogta Grabber).
Jooji, uma baahnid inaad wax kale qabato, maxaa yeelay Nowgoal Data Grabber waxay si toos ah ugu xirmi doontaa barta Nowgoal (bidix shaashadda waxaad arki doontaa bogga bogga la furi doono) maalinba maalinta ka dambeysa waxay soo saari doontaa dhammaan xogta aad xiiseyneyso!
Marka hawsha soo saarista la dhammeeyo, waad keydin kartaa keydkaaga, waxaad xareysaa kayd hore loo keydiyey, ama waad tirtiri kartaa dhammaan xogta la qabtay.
Tusaale ahaan, haddii aad billowday inaad soo saarto xogta hal sano ah (waxaan kugula talinayaa inaad soo saarto hal bil markiiba), waad buuxin kartaa ama keydin kartaa arjiga, adoo sii wadaya macdanta horay loo hakiyay; sidaa darteed waa suurtagal in la sameeyo qaybo ka mid ah soo saarista maalmo, toddobaadyo, bilo, iwm.
Furaha bidix / midig furaha waxaad sidoo kale ku duuduubi kartaa diiwaanka laga bilaabo kan ugu horeeya ilaa kan ugu dambeeya, ku kala saar iyaga oo kordhinaya taariikhda (Ku Dalbo Taariikh) iyo badhanka midigta ku yaal, waxaad ku furi kartaa galka meesha ay ku keydsan yihiin dhammaan keydku. (qaab db Helitaan).
Nowgoal Data Grabber: vsBeddelashada arjiga ee Excel
Midigta fog waxaad ka heli doontaa furaha ugu muhiimsan, kaas oo kuu oggolaanaya inaad keydisokeydka tirakoobka goolasha lagu qabtay qaab u dhigma Excel.
Marka tan la dhammeeyo, waxaad dib u furi kartaa faylka 'Excel' adigoo adeegsanaya dhammaan miirayaasha la heli karo, waxaad si qoto dheer u falanqeyn kartaa tirakoobka hadafka kooxeed si aad si fiican ugu dejiso sharadkaaga internetka.
Soo Degso Fayl	NGDGrabber.zip - 54 MB